बाली सखाप पार्ने फौजी किरालाई कसरि नियन्त्रण गर्ने ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठकृषिबाली सखाप पार्ने फौजी किरालाई कसरि नियन्त्रण गर्ने ?
साना किरा छन् भने निममा आधारित विशादी हाल्नुपर्छ। अलि ठूला जातका किरा छन् भने सुरक्षित विषादीको प्रयोग गर्न उनी सुझाउँछन्। उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी ६ प्रकारको विषादी सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, नीमजन्य बिषादी एजाडिराक्टिन १५०० पिपिएम प्रतिशत मिलि लिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने गर्नुपर्दछ। जैविक बिषादीको हकमा ब्याक्टेरीयामा आधारित बिषादी जस्तै महाशक्ति, डाइपेल २ मिलिलिटर वा २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखी छर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
एउटै बिषादी निरन्तर प्रयोग नगरी आलोपालो गरी प्रयोग गर्ने तथा घोगा लागिसकेपछि बिषादी प्रयोग गर्न नहुने उनले बताए। बिषादी छर्दा एक रोपनीमा लगाइएको मकैलाई २५ लिटर बिषादी हालेको तयारी झोल प्रयोग गर्ने र तयारी झोल गुभोमा पर्ने गरी छर्न उनी सुझाउँछन्।
यसका लागि किसानले मेहेनेत बढी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यसरी विषादी प्रयोग गर्दा फौजी किराको अस न्युन हुने उनको अनुभव छ। यो बाहेका नार्कको कीट विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिकहरूले फौजी किरा व्यवस्थापनका लागि अन्य सुझाव पनि दिएका छन्।
राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा लगाएको मकैको आधारमा यस किराले बैशाखदेखि कात्तिकसम्म धेरै नोक्सान गरेको छ भने पुस मागमा कम असर गरेको छ। यो किरा बाट अफ्रिकी मुलुकमा उपज घाटा मकैको उत्पादनमा ५ देखि ५३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको रिपोर्टले देखाएको छ।